Ny valindrihana dia vita amin'ny jiro LED 29000. Mahagaga! - Shenzhen Dengfeng Power Co., Ltd.
an-trano > Vaovao momba ny indostria > Ny valindrihana dia vita amin'ny jiro LED 29000. Mahagaga!
Ny valindrihana dia vita amin'ny jiro LED 29000. Mahagaga!
Vola mando any Chicagony mers sy ny ririnina mangatsiaka dia mametra ny fampiasana ny lavarangana client. Mba hamahana ity olana ity dia mikendry ny hamorona efitrano masoandro feno hazavana sy mahafinaritra ary hamalefaka ireo Toerana efatra misy tsipika mikoriana ireo mpanao mari-trano.
Ny valiny dia miolakolaka,mangarahara, backlitvalindrihana mono izay mitondra hazavana miparitaka eraky ny efitrano.
The project initially attempted to build the ceiling with flexible plasterboard walls, but when lighting was considered, the usual solutions were recessed ceiling lighting or recessed grooves -- a radical change in the famolavolana concept.
Amin'ny alàlan'ny fanafenana ny jiro ao anaty akrilika translucent, ny valindrihana manontolo no hany singa maivana amin'ny habakabaka. Ny fitaovana matavy veltety dia manafoana ny taratry ny specular, ary ny habetsahana mitsingevana eo ambonin'ny rindrina dia mampifangaro lalina kokoa amin'ny trano miaraka amina vanim-potoana lehibe .
Curved, mangarahara, backlit monolithic ceiling
Ankoatra ny tontolo iainana
Ny habe manify sy ny haingam-pandrefesana an'ity valindrihana sary sokitra ity dia misoroka ny fahatsapana faobe barbaric. Ny valindrihana dia mihoatra ny fetran'ny efitrano ary koa ny fomba fijery tokana, manao azy ho tontolo iainana fa tsy zavatra iray. milamina, tsy mitovy, nefa mandanjalanja tsara. Ny tsy fisian'ny fahasamihafana eo amin'ny fifantohana dia mamela ny tompon-trano haka aina tsy rototra eo ambanin'ny valindrihana "mikoriana".
Ny fitaovana jiro dia miafina ao anatin'ny akrilika translucent
Ny valindrihana manontolo dia lasa singa tokana ao amin'ny habakabaka
Mamorona jiro miharo
Ny valin-drihana dia kely amin'ny 8 santimetatra avy eo ambanin'ny tampon-trano amin'ny toerana sasany, noho izany ny fametrahana jiro manaraka ny rindrina na amin'ny fomba zaraina dia mety hitarika faritra maivana sy ambanin'ny maizina. Araka izany, mila efitrano lehibe sy malalaka fanamboarana jiro fanamiana.
Ny tady LED tariby ambany dia voafantina ho hazavana noho ny androm-piainany maharitra, ny elanelan'ny diode manokana ary ny vidin'ny faritra lehibe.3100K sy 4000Kmba hahatratrarana spectrum feno kokoa, izay miteraka hazavana fotsy madio kokoa. Ny telegrama dia mizara roa, manasaraka ny LED amin'ny loko isan-karazany ary mampifandray amin'ny switch dimmer efatra. Raha tsy misy ny teritery amin'ny angovo, ny vahaolana dia mampihena ny fanjifana angovo, tsy ny fanomezana aina fotsiny fanazavana ny efitrano, fa manome fahalalahana ihany koa ny tompona hifehy ny mari-pana amin'ny loko ary mamorona rivo-piainana mafana na mangatsiaka na ho an'ny ririnina na fahavaratra.
Mampiasà hazavana miparitaka hisorohana ny aloka
The shadows behind the translucent acrylic panels could have been seen from below. Instead of using a heavy solid frame to support the acrylic panels, the architects famolavolanaed an L-shaped installation system.Each part of the system is suspended and connected by two thin ropes.If the LED lights were placed on the roof and facing down, the ropes would cast countless shadows on the acrylic sheets.
Raha ny tokony ho izy, ny jiro tena izy dia misy jiro LED miatrika ary nilahatra tamina takelaka acrylic mangarahara nahantona teo anelanelan'ny tampon-trano sy ny valindrihana. Izy io dia mamadika ny sisin'ny tampon-trano ho boaty hazavana lehibe izay mizara ny mazava mivantana amin'ny alalàn'ny fotsy.
Ny jiro LED dia napetraka eo anelanelan'ny tafo sy ny valindrihana
Rehefa vita ny akoron'ny efitry ny masoandro dia nalefan'ny mpanao mari-trano hatrany amin'ilay tranokala izy ary niara-niasa tamin'ny mpanjifa hamita ny valindrihana valindrihana iray manontolo. rafters, misy tariby fampiatoana mihoatra ny 5000 metatra.
Eo ambanin'ilay hazo fisaka dia misy takelaka acrylic mangarahara miisa 128 izay manohana jiro LED 29,000 mifandray amin'ny tariby 7000 metatra.397 Module namboarina notapatapahina cnc mba hanolorana zoro samihafa. Ny fandeferana manokana momba ny valindrihana ho an'ny valindrihana manontolo dia fehezin'ny 1/32 ".
:Ny fironana ankapobeny amin'ny indostrian'ny jiro
:Shenzhen Dengfeng Power Supply Co., Ltd. Fampirantiana fahombiazana ao amin'ny LED Expo Thailand 2019